VANCH - Qalabka UHF RFID Reader, UHF RFID Soo Saaraha Tagista / Alaab-qeybiye
Wax soo saarka Vanch badanaa waxaa ku jira akhristaha UHF RFID, UHF RFID akhristaha go'an, UHF RFID akhristaha isku dhafan, Android UHF RFID gacanta akhristaha, Bluetooth UHF RFID gacanta akhristaha, UHF RFID qoraa akhristaha desktop, UHF RFID akhristaha warshad, UHF RFID akhristaha albaab, UHF RFID module, UHF RIFD summada dharka, UHF RFID tag tag bir ah, Anteenada RFID, Sumadda RFID iyo wixii la mid ah
Lagu daabici karo UHF RFID Soft Iron Iron Tag VT-200
PCB UHF RFID Anti Iron Tag VT-83
Wixii su'aalo ah ee ku saabsan alaabadayada ama qiimeeyeyaashayada, fadlan noo dhaaf email-kaaga oo waan kula soo xiriiri doonnaa 24 saacado
Maaddaama ay tahay xirfadle soo saaraha hirarka raadiyeyaasha ee wireless-ka ah iyo bixiyeyaasha xalka, Sirdoonka Shenzhen Vanch waxay ka go'an tahay inay kor u qaaddo adeegsiga tikniyoolajiyadda RFID ee warshadaha kala duwan ayna ka caawisaa macmiilka sidii loo hagaajin lahaa hufnaantooda, maaraynta, fahamka iyo xog-warranka adiga oo adeegsanaya tikniyoolajiyadda hoggaamineed, alaabada iyo khibradda hodan ku ah cilmiga RFID. Codsiyada maareynta bakhaarka, maamulka shaqaalaha, maaraynta hantida, qalabaynta warshadaha, gaadiidka caqliga leh, magaalooyin caqli badan, saadka, tafaariiqda, raad raac wax soo saar, iwm. Shirkadda ayaa heshay wax ka badan 40 shati-siinta waxaana lagu abaalmariyay inay tahay ganacsi teknolojiyad sare ah iyo horumarinta barnaamijyada kombiyuutarka iyo naqshada. Alaabtu waxay gudbeen shahaadada CE iyo FCC waxaana loo dhoofiyaa in ka badan 60 dalalka iyo gobollada adduunka oo dhan.
Soo-saare soo-saare raadiyo-wil-wade xirfadle ah iyo bixiye xallin